Services | PTI Company Limited
Tel: +95-9-441 100 200
Email us: info@ptimyanmar.com
KAZANCI Holding & Group Companies
☆ အန္တာရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး
☆ သုံးစွဲသူ၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ရရှိရေး
☆ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရေး
☆ အရည်အသွေးပြည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးနို်င်ရေး
< class="ot_custom_heading " style="color: #232175;" >THE TYPES OF SERVICES
★ Surveying, Load Calculation, and Genset Sizes Recommendation:
မီးစက်တပ်ဆင်မည့်နေရာကို ဦးစွာလေ့လာပြီးလိုအပ်သည့်လျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုတွက်ချက်၍ သင့်တော်သော စက်အမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားကို အကြံပြု ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း။
★ Installation and Load Testing:
ဝယ်ယူပြီးမီးစက်များကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ စနစ်ကျသော Installation ပြုလုပ်ကာ Load Test စမ်းသပ်ပေးခြင်း။
★ Customer Generator Usage Training:
မီးစက်အသုံးပြုပုံနှင့် သတိထားရမည့်အချက်များကို သုံးစွဲသူများ သိရှိစေရန် သင်ကြားပေးခြင်း။
★ Preventive Maintenance:
လိုအပ်ချိန်တွင် ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် တစ်လတစ်ကြိမ် ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု (Preventative Maintenance) ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
★ Periodic Maintenance:
သုံးစွဲမှုအချိန်ကာလ ကြာမြင့်လာခြင်းအပေါ်မူတည်၍ အင်ဂျင်ဝိုင်လဲခြင်းနှင့် အခြား စိစစ်စရာများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် Trouble Shooting ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
လိုအပ်ပါက မှန်ကန်သော နည်းပညာကို အသုံးပြု ပြင်ဆင်ပေးခြင်း။
Installation မှစ၍ စက်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပြင််ဆင်ရေးအပိုင်းတို့အထိပါ လျင်မြန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်စေရန် စက်ကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့် သွားလာရေးယာဉ်များကို ၂၄ နာရီ အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ထားရှိပါတယ်။
PTI Company Limited ရဲ့ Service Team မှ ဝန်ထမ်းများဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသာမက ပြင်ပ သင်တန်းကျောင်းများအထိပါ Training ပြုလုပ်ထားပြီး စာတွေ့လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများ ခံယူထားတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်ရှိပြီးလုပ်သက်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော ပညာရှင်များဖြစ်ကြပါတယ်။
In order to utilize the generator’s life span efficiently, we provide high quality products and services.
Generators are an investment beneficial not just in the short-term, but areaworthwhile investment for the long-term ranging from 20-30 years.
လျှပ်စစ်မီးပျက်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းပေါ် မူတည်ပြီး ထိခိုက်နစ်နာမှု ဆုံးရှုံးမှု အနည်းနဲ့အများ ရှိနိုင်ပါတယ်။ လိုတဲ့အချိန်ချက်ခြင်း အသုံးပြုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
တန်ဖိုးကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အကျိုးအမြတ်
သင့်မှာ Stand-By Generator ထားခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ် အများကြီးရှိပါတယ်။ သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ခြင်း ပိုမိုတိုးတက်အောင် ကြံဆောင်ခြင်း
Generator ဝယ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက “ဒီနေ့ မနက်ဖြန် အတွက်သာ မဟုတ်ပါ။
နောင် ၁၀နှစ် အနှစ်၂၀ မကတဲ့သက်တမ်းအတွက် ရေရှည်ရင်းနှီးရတဲ့ Capital Investment” ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတွက် တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးရတဲ့ Generator ကို သက်တမ်းအပြည့် အသုံးချနိုင်ဖို့ အတွက်
PTI Company မှ
Generator သက်တမ်းအတိုင်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတဲ့အချိန်ချက်ခြင်း အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်
WHAT IS PM SERVICE
PM Service ဆိုတာ ဖြစ်တက်သည့် စက်ချို့ယွင်းမှုကို ကြိုတင်လေ့လာ သိရှိထားပြီး ယင်းကို လျော့ပါးစေရန်၊ စက်ကောင်းစဉ်ကာလကတည်းကပင်၊ ကြိုတင်၍ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းကို PM service ဟုခေါ်ပါသည်။
Preventive Maintenance သည် မီးစက်များကိုစိတ်ချရဖို့ အဓိကအခန်းကဏ္ဌမှာပါဝင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်စက်ပျက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်၊ ရေရှည်အသုံးစားရိတ်များကို ချွေတာနိုင်
စက်ကို ပုံမှန်ဂရုစိုက်ဖို့ လစဉ်စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
Generator သက်တမ်းအပြည့်အဝ အသုံးပြုဖို့အရေးပေါ် Service ကို ခေါ်ရတဲ့ အခက်အခဲ များကို ကင်းရှင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်လျှင်ချက်ခြင်းအသုံး ပြုနိုင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်
မီးစက်ကို မကြာခဏသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခါတစ်ရံမှ သုံးရသည်ဖြစ်စေ စနစ်ကျတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ မပြုလုပ်လျှင် စိတ်ချယုံကြည်မှုနဲ့သုံးစွဲရတဲ့တန်ဖိုးလျော့ကျသွားစေပါတယ်။
စနစ်ကျတဲ့ အချိန်မှန်လုပ်တဲ့ PMP များ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ အကုန်အကျများတဲ့ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ရခြင်းမှ ကင်းဝေးပြီး လိုအပ်ချိန်မှာ စွမ်းအားပြည့် အသုံးချနိုင်မည်။
သင့်လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက်ကို သေချာစေဖို့ရာ Preventive Maintenance နဲ့ Testing ကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Protecting Your Investment, Improving Life Safety.
We offer customizable preventative maintenance solutions that will protect your Power Generator– and your entire facility.
PTI CARE SERVICES
Survey & Recommendation
Periodical service and maintenance
24/7, Telephone and Onsite technical support.
Synchronization and power management
Load Bank Testing Service.
Service Interval အတိုင်း manufacturing company က ညွှန်ကြားထားတဲ့ အချက်များကို စနစ်တကျ တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်း
သုံးစွဲသည့်အချိန်အတိုင်းအတပေါ်မူတည်၍ လုပ်ဆောင်ရသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
Generator ၏ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေအတိုင်း သုံးဆောင်နိုင်မှာပါ။
အဲဒီအတွက် နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များ သင့်တင့်သလောက်သာ ကုန်ကျနိုင်ခြင်း
စက်ပျက်စီးမှုနည်းပြီး Generator Lifespan ကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်ခြင်း။
24/7, TELEPHONE AND ONSITE TECHNICAL SUPPORT
ရုတ်တရက် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် မီးစက် ချို့ယွင်းခဲ့လျှင်တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးခြင်း။
LOAD CALCULATION & RECOMMENDATION
ကိုယ်သုံးမယ့် Load နဲ့ အကိုက်ညီဆုံး Generator Size ကို ရွေးချယ်ခြင်းဟာ ပထမဆုံး အရေးကြီးဆုံးပါ။
Load မကိုက်ခြင်းရဲ့ ပြဿနာများ
Generator Size က ကြီးနေရင် အင်ဂျင်မှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံနိုင်တဲ့အတွက် မသုံးသင့်
Generator Size က ငယ်နေရင် စက်ကရှိတဲ့အားထက် ပိုပြီးရုံးရတဲအတွက် စက်မြန်မြန် အရည်သွေးများကျဆင်းနိုင်။
PTI SERVICE TEAM MISSION
Porduct Longevity ရေရှည်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်၊
< class="ot_custom_heading " style="color: #232175;" >PTI VISION
To BecomeaCorporation on par with those thriving internationally. In order to achieve our goal, we must meet the international standards of Business, Management and the Technical Sector.
PTI offersacomprehensive line of services; our experts have extensive experience in specifying, quoting, installing, and maintaining standby generating applications. We have factory trained field service technicians available to provide certified preventive maintenance, 24×7 emergency service, warranty support, and authorized factory startup services.
Our technicians are highly trained (overseas) to deal with any technical problems that could occur.
Technical service from oversea experts and consultants with vast experiences can be hired to support our projects.
We can undertake any project, ranging from delivery to meeting site specific installation requirements for
manual/ automatic change over
switches and power cabling.
Preventive maintenance (visits, inspections, tests and reports)
FULL SPECIFICATION AS STANDARD
Bunded 8 hour fuel tank
Deep Sea controls
Fully enclosed silencer
Frame edge drainage point
Engine warning & shutdown
Fully protected batteries
Dual point lifting
Silent & open versions
Tough powder paint finish
Choice of alternators
Profound Technology Incoporated
+95-9- 441 100 200
Copyright © 2020 PTI Myanmar.All Rights reserved - Web Designer MWS